प्रत्यक्ष मार्केटिंग परिवर्तन भएको छ - /०/40०/२०२० र अधिक नियम छैन Martech Zone
आइतबार, अगस्त 26, 2007 सोमबार, अगस्ट 27, 2007 Douglas Karr
म आज बिहान मेरो बुकसेल्फको आयोजना गर्दै थिएँ र मेरो पुरानो डायरेक्ट मार्केटिंग पुस्तकमा पल्टियो, जुन नम्बरहरू द्वारा डायरेक्ट मेल। यो संयुक्त राज्य अमेरिका हुलाक कार्यालय द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो र एक राम्रो राम्रो गाइड थियो। जब म सीधा मेल गर्दै थिएँ, म स्थानीय पोस्टमास्टरमा गएँ र त्यहाँ एउटा बाकस लिएँ। जब हामी एक ग्राहकको साथ भेट्यौं जुन पहिले कहिल्यै डाइरेक्ट मेल नगरेको, उनीहरूको लागि सीधा मार्केटिंगको फाइदा छिटो सिक्नको लागि यो एक उत्तम स्रोत थियो।
आज पुस्तकको समीक्षा गर्दा मैले बुझें कि विगत केहि दशकमा कति चीजहरू परिवर्तन भएका छन् - पछिल्लो केहि बर्षहरूमा।
प्रत्यक्ष मार्केटिंगको पुरानो सिद्धान्त /०/40०/२० नियम थियो:
40% परिणाम तपाईले पठाउनु भएको सूचीको कारण हो। यो एक सूची हुनसक्दछ जुन तपाईंले भविष्यको लागि खरीद गर्नुभयो वा तपाईंको अवस्थित ग्राहकहरूको सूची समावेश गर्न सक्दछ।
40% परिणामको तपाइँको प्रस्ताव को कारण थियो। मैले सँधै ग्राहकलाई भनेको छु कि तपाईको सिधा मेल अभियानमा सम्भावित आकर्षण गर्न समयको मात्रा मेलबक्स र रद्दी टोकरी बीचको चरणहरूको संख्या बराबर थियो।
20% परिणामको कारण तपाईंको सिर्जनात्मक हो। यो सप्ताहन्तमा मैले एउटा नयाँ घर बिल्डरबाट एक सीधा मेल टुक्रा प्राप्त गरें। यो मोडल घरमा परीक्षण गर्न एक कुञ्जी थियो। यदि कुञ्जी फिट भयो भने, तपाईं घर जित्नुहुन्छ। यो एउटा चासोको प्रस्ताव हो कि मलाई भर्खरको नजिकको समुदायमा ड्राइभ गर्न लगाउन सक्छ - धेरै रचनात्मक।
डायरेक्ट मेल र टेलमार्केटिंगले अन्तिम दुई दशकहरूमा यस नियमलाई थम्बको प्रयोग गर्‍यो। कल नगर्नुहोस् रेजिस्ट्री र क्यान-स्पाम अधिनियमले प्रमाणित गरिसक्यो कि उपभोक्ताहरू घुसपैठबाट थकित छन् र अनुमति बिना बिन्तीको साथ प्रस्तुत गर्दैन। वास्तवमा, म विश्वास गर्दछु कि अनुमतिको अभावले तपाईंको अभियानमा नकारात्मक असर पार्छ र सूचीको महत्त्व बढाउन योग्य छ।
माउथ मार्केटि ofको शब्द अब प्रत्येक कम्पनीको मार्केटिंगको महत्त्वपूर्ण अंश हो - तर यो मार्केटिंग विभागको स्वामित्वमा छैन, यो ग्राहकको स्वामित्वमा छ। यदि तपाईं आफ्ना प्रतिज्ञाहरू लाई डेलिभर गर्न सक्नुहुन्न भने, मानिसहरूले यसको बारेमा सुन्नेछन् तपाईंको अभियान चलाउनको लागि लाग्ने समय भन्दा छिटो। मुख मार्केटि ofको शब्दले प्रत्येक मार्केटि campaign अभियानलाई प्रभाव पार्नेछ। यदि तपाईं उद्धार गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यसो नगर्नुहोस्।
यो सजिलै जिब्रोबाट बग्दैन, तर म विश्वास गर्दछु कि नयाँ नियम -5-२-२११ नियम हो
50% परिणामहरू तपाईंले पठाउनु भएको सूचीको आधारमा हुन् र ती सूचिमा प्यारामाउन्ट तपाईंसँग तिनीहरूसँग बोल्ने अनुमति छ र साथै सूची कसरी लक्षित छ।
20% परिणाम को सन्देश को कारण हो। श्रोतालाई सन्देश लक्षित गर्नु आवश्यक छ। सही समयमा सहि श्रोताहरुलाई सहि सन्देश भनेको तपाईको अनुमतिलाई कायम राख्न र मार्केटिंग कोशिसको लागि आवश्यक पर्ने नतिजा प्राप्त गर्ने एकमात्र तरीका हो।
20% परिणाम को ल्याण्डिंग को कारण हो। ईमेल मार्केटिंग को लागी, यो एक अवतरण पृष्ठ हो र उत्पादन वा सेवा को लागी सेवा र कार्यान्वयन। यदि तपाईं आफूले बजारमा गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यसो भए मुखको शब्दले सन्देशलाई छिटो बाहिर निकाल्छ तपाईंले त्यसलाई टाल्ने प्रयास गर्न भन्दा छिटो। भविष्यमा सफल विकासको लागि तपाईंले ग्राहकलाई राम्रोसँग "भूमि" बनाउनु पर्छ।
10% तपाइँको मार्केटिंग अभियान को सृजनात्मकता अझै छ। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि म सृजनात्मकताको बारेमा विगतको भन्दा कम महत्त्वपूर्ण छु - त्यो सत्य होइन - अनुमति, सन्देश, र ल्यान्डि they पहिले भन्दा पहिले बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सीधा मार्केटिंगको पुरानो direct०/40०/२० नियम कहिल्यै अनुमति, शब्द-बाट-मार्केटिंग, र न त तपाईंको उत्पादन र सेवाको कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दछ। मलाई लाग्छ 5-2-2-1 नियम गर्छ!
अगस्ट 26, 2007 बेलुका 9:36 बजे
मैले भन्नु पर्छ कि तपाइँको विज्ञापन लिङ्क प्रत्येक ब्लग पोस्टिंग को पहिलो लाइन को रूप मा म FeedDemon मा के पढ्न चाहन्छु निर्णय गर्न धेरै गाह्रो बनाइरहेको छ। मैले अब पहिलो अनुच्छेद प्राप्त नगरेकोले, मैले विज्ञापन मात्र पाउँछु, म प्रायः सम्पूर्ण फिडलाई पढेको रूपमा चिन्ह लगाउँछु।
जब मैले एक्सपोजरलाई अधिकतम बनाउनु पर्ने आवश्यकता बुझेको छु, म कृपया सुझाव दिन्छु कि टेक्स्ट विज्ञापनलाई पोस्टिङको मुख्य भागमा पहिलो पङ्क्तिको रूपमा राख्नुले तपाइँको सामग्रीलाई अझ आकर्षक बनाउन अनुमति दिनेछ र म जस्ता मानिसहरूलाई बुद्धिमानीपूर्वक निर्णय गर्न अनुमति दिन्छ कि तपाइँ तपाइँको हेर्दै हुनुहुन्छ। पोस्ट गर्नु राम्रो विचार हो वा होइन।
अगस्ट 26, 2007 बेलुका 9:54 बजे
टिम, यो राम्रो प्रतिक्रिया हो। मैले यसलाई पोस्ट गरेपछि र यसको बारेमा बिर्सिसकेपछि मैले याद गरें... आज राती मैले यसलाई फिडको फेदमा सारें। मलाई थाहा दिनको लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। म यसलाई धेरै कदर गर्छु!
अगस्ट 26, 2007 बेलुका 10:17 बजे
डग, दुबै समझदार र प्रतिक्रियाशील भएकोमा धन्यवाद।